Politics – Page 175 – Zimbabwe Online News
Home » Archive by category "Politics" (Page 175)
Media credibility plummets: MMPZ – The Zimbabwean
Media credibility plummets: MMPZThe ZimbabweanMedia credibility plummets: MMPZ. A recent report titled Media Credibility Index by the Media Monitoring Project Zimbabwe has accused the media of fabricating stories, most of which are related to politics ...
John Makumbe – a Life of Worth – AllAfrica.com
John Makumbe - a Life of WorthAllAfrica.comGiven the way he was and the way he expressed himself, it was inevitable for him not to brush against certain politicians or even those he worked with at the University of Zimbabwe. Whereas others viewed his e...
Zim govt official wants ‘developmental state discourse’ rekindled – The Zimbabwean
The ZimbabweanZim govt official wants 'developmental state discourse' rekindledThe ZimbabweanHonorable Moyo spoke about the coalition government formed as a result of the Global Political Agreement in September 2008; at that time the government...
Youths demand larger stake in politics – Zimbabwe Independent
Youths demand larger stake in politicsZimbabwe IndependentIn Zimbabwe, the youths have had a chequered if not infamous role in the political and socio-economic affairs of the country beginning with the communist-style Zanu PF youth brigades of the 1980...
NGO outreach program disrupted – The Zimbabwean
NGO outreach program disruptedThe ZimbabweanThe meeting that was being co-hosted by Zimbabwe Organisation of the Youth in Politics and Centre for Community Development Zimbabwe could not proceed after the youths invaded the venue. The organisers of the...
Zimbabwe is poorer without Makumbe – The Zimbabwean
The ZimbabweanZimbabwe is poorer without MakumbeThe ZimbabweanI was also sure that he would become an instant darling with Zimbabweans across the political divide because of his humble approach to life. We have the tragedy of elitist politicians here, ...
Threats of elite political cohesion – Zimbabwe Independent
Threats of elite political cohesionZimbabwe IndependentInstead, the next six months in Zimbabwe are prelude to a conclusion of elite cohesion in relation to varying aspects of our society from the political to the economic, the social and even the reli...
175 of 184« Previous1…173174175176177…184Next »